Raha efa nanomana vakansy efa nandrasana efa ela ianao any amin'ny firenena mandroso indrindra any Amerika Latina, dia mila mahafantatra mialoha mialoha ireo fepetra ahafahana mamakivaky sisintany Orogoay. Ao amin'ity lahatsoratra ity no hahitanao ny valin'ny fanontaniana fototra: mila visa ho an'i Orogoay ho an'ny Rosiana sy ny Okrainiana ve ianao amin'ny taona 2017. Fantaro ihany koa ireo fitsipika fototra momba ny fidirana ao amin'ny firenena sy ny fonosana antontan-taratasy izay mila miomana amin'ny fahazoana visa.
Ny fanjakana Orogoay dia nanjary nalaza tamin'ny mpizahatany rehefa nofoanana ny fanaraha-maso ny visa tamin'ny 2011. Mba hahafahanao mahafantatra ny toerana , ny fomba amam-panao sy ny kolontsain'ny firenena, dia tsy ilaina ny mifikitra amin'ny fombafomba fanangonana antonta-taratasy. Any Uruguay, afaka mijanona tsy misy marika ianao ao amin'ny pasipaoro vahiny mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny 3 volana. Amin'ity tranga ity, ny tanjon'ilay fitsidihana dia mety ho fizahan-tany fizahan-tany, fifampiraharahana ara-barotra, fitsidihana vahiny na fifindra-monina.
Mba handalinana ny fifehezana any amin'ny seranam-piaramanidina tsy misy olana tsy ilaina, ilaina ny mameno ny karatra migadra mialoha. Tokony hanana ireto tahirin-kevitra manaraka ireto aminao koa ianao :
pasipaoro vahiny izay mihena ny valim-panavotana aorian'ny 6 volana monja;
taratasy, manamarina ny famandrihana ao amin'ny hotely na hotely;
tapakila fiaramanidina amin'ny andaniny roa;
ny fanamafisana ny fahamendrehana ara-bola amin'ny faharetan'ny dia manerana ny firenena. Mety ho karatra karta na vola izany.
Ireo mpizahatany dia nodidiana mba handoavana mialoha ny kaontiny, satria any Orogoay dia tsy voatery foana ny karama amin'ny karatra, indrindra raha misy ifandraisany amin'ny MasterCard. Sarotra ny mahazo vola avy any amin'ny banky ary indrindra raha manakalo izany. Ao amin'ny birao fandatsaham-bato, manangana tranokala lehibe foana. Raha misy olana ara-pitantanana, ireo mpizaha tany dia afaka mihatra amin'ny masoivoho Rosiana any Orogoay, izay hita ao amin'ny: Montevideo , Boulevard Spain, 2741.
Visa miasa amin'ny masoivoho
Ho ela velona any Uruguay dia tsy maintsy misy antontan-taratasy fanomezan-dàlana. Raha handeha hanao raharaham-barotra ianao, hiasa na hianatra any amin'ity firenena ity, dia mila mangataka amin'ny Masoivohon'i Orogoay any Moskoa ianao mba hikarakarana visa. Ny Consulat dia manakaiky ny Kianjan'i Kaluga ao amin'ny araben'i Mytnaya ao amin'ny trano faha-3, birao 16. Misokatra isanandro ny serivisy, afa-tsy faran'ny herinandro, hatramin'ny 10:00 hatramin'ny 17:00. Ny masoivoho dia tokony hanome ireto tahirin-tsoratra manaraka ireto, izay ahitana fampahalalana feno sy azo antoka:
Ny pasipaorony dia manan-kery mandritra ny 6 volana + dika mitovy amin'ny pejy voalohany;
sary fotsy mainty sy fotsy ary loko maitso misy 3x4, ary koa ny sarin'ny ankizy rehetra voasoratra ao amin'ny pasipaoro;
taratasy fangatahana miaraka amin'ny sonia manokana, vita amin'ny teny Espaniôla, Anglisy na Rosiana. Amin'io tranga farany io, ny angona manokana dia tokony hosoratana amin'ny literatiora latinina, ary koa amin'ny pasipaoro vahiny. Amin'ny zaza, ny taratasy fangatahana dia fenoina;
dika mitovy amin'ny taratasy fanamarinam-pahaterahana, voamarin'ny mpamaritra, ho an'ireo mpizahatany tsy ampy taona;
fahazoan-dàlana hanondrana ny zaza avy any amin'ny firenena amin'ny ray aman-dreny, izay mitoetra ao an-trano. Ity antontan-taratasy ity dia tsy maintsy asiana sonia sy marihan'ny notatera ihany koa;
bola amin'ny fiaramanidina amin'ny andaniny roa;
Fanambarana miantoka ny fialanao any an-tanindrazanao;
fanasana avy amin'ny olom-pirenena Orogoaiana amin'ny fitsidihana manokana;
Fanamarinana avy amin'ny toeram-piasana izay ahitana taratra momba ny karazana asa sy ny vola miditra;
kopia na fakatahaka amin'ny taratasy, manamarina ny famandrihan'ny efitrano ao amin'ny hotely na hotely .
Ny vanim-potoana miandry aorian'ny fanomezana ny antontan-taratasy dia mety afaka iray volana. Izany dia noho ny taratasy nalefa any amin'ny sampan-draharahan'ny fifindra-monina any Uruguay, ny taratasy rehetra, izay manaiky na manilika ny fangatahana. Raha manana fanontaniana ny mpiasa dia afaka manasa azy ireo hanao fanadihadiana na mangataka fanampim-panazavana fanampiny. Rehefa avy nandray fanapahan-kevitra tsara izy dia tsy maintsy mandoa vola 42 dolara amerikana ny Rosiana. Raha vantany vao voaroa ny saram-pandraharahana ary misy ny taratasy fangatahana, ny visa fizahan-tany dia voamarika ao amin'ny pasipaoro mpizahatany.
Visa ho an'ireo Okrainiana
Ny olom-pirenen'i Okraina ho an'ny dia mankany Orogoay dia tokony handamina foana ny visa. Manolo-kevitra ny manokatra izany mialoha, satria mety haharitra hatramin'ny iray volana fanampiny ny famerenana roa andro fanampiny. Ny filahatry ny fisoratana anarana, ny teny sy ny fonosana amin'ny antontan-taratasy dia mifanaraka amin'ny fepetra Rosiana, saingy aza adino fa ny fahazoan-dàlana dia manan-kery mandritra ny 90 andro. Rehefa vita ny fanontana amin'ny 2017, ny Okrainiana dia tokony hanondro ny fampahalalam-baovao:
momba ny toerana nahaterahana (amin'ny antsipiriany);
adiresy feno amin'ny fisoratana anarana eo amin'ny toeran'ny toeram-ponenana;
momba ny toeram-piasana amin'ny fampianarana ny lahatsoratra, adiresy sy telefaona;
momba ny sata ara-panambadiana;
momba ny ray aman-drenin'ilay mpangataka, anisan'izany ny anaran'ny reniny;
finday, finday ary lahasa finday.
Ho an'ireo Okrainiana vitsy an'isa amin'ny 2017, dia takiana amin'ny ankizy Rosiana ihany koa ireo fepetra ireo. Amin'ny fiafaran'ny fanamarinana ny fahazoan-dàlana, ireo mpizahatany dia afaka manitatra izany amin'ny consulat mandritra ny fotoana hafa.
I Celine Dion dia manafoana ny fananan-tany: ny trano fonenany any Florida dia nahita tompona vaovao
Ahoana no hamehezana tavoahangy?
Anesthesie eo an-toerana
Mpanao fitokisana amin'ny USB Flash Drive
Protaras na Ayia Napa?
Ahoana no hikarakarana perla ao an-trano mba hahasarika azy?
Fanondranana akanjo maody faharoa
Ahoana ny famindrana kaktus amin'ny vilany iray hafa?
Ranomasina kale solyanka
Skirt amin'ny baskety - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Mihetsika ny onjam-peo
Sandwich miaraka amin'ny salmon
Global Faile: Gwyneth Paltrow dia tsy mahalala izay nosoratan'ny HLS teo amin'ny tranonkalany!
Daty Daty vao teraka
Ny vadin'i Kevin Hart, Eniko Parrish dia miandry ilay zaza
Kvass avy amin'ny voankazo maina
Kombucha - toetra mahasoa sy fanoherana